မာန | PoemsCorner
ငါ နင်နဲ့ပြတ်တဲ့နေ့က နင်က ငါ့ကိုပြောတယ်လေ
ငါက ငါ့၇င်ထဲကဆန္ဒကိုဖုံးကွယ်တဲ့ မိန်းမ
ပိုပြီးတော့ ဒုက္ခတွေကို ခံစား၇တယ်တဲ့
ငါ အဲလိုဖြစ်နေပေမယ့် ငါကျေနပ်နေတယ်
In: ကဗျာ Posted By: greatgirl682 Date: Jan 6, 2011
Leave comment 11 Comments & 489 views
ဟုတ်တယ်………… ဒါတကယ်တော့ အမှန်ပဲ….
အဲ့ဒီ မာနတွေကို သဘောကျတာ…..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်nyo အားပေးတဲ့အတွက် လူတိုင်းမှာမာန၇ှိသလို ယောင်္ကျား မိန်းမတိုင်းမှာလဲမာယာ၇ှိပါတယ်
By: greatgirl682 at Jan 7, 2011
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ… လူတိုင်းမှာ မာနရှိပါတယ် ……….. တလွဲမာနနဲ့ တယူသန်မာနနဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းမာနဆိုပြီး ကွဲသွားတယ်ဗျ………. ကျွန်တော်ကတော့ တလွဲမာနရှိသူတစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ညီမရေးတဲ့ ကဗျာကို ထောက်ခံတယ်ဗျာ…. comment ရေးတာက ကဗျာကို ဖတ်ပြီးပြီးချင်း ရေးလိုက်တာပါဗျာ… အပေါ်က comment ကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့ အနေနဲ့ ရေးတာ မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။ ဆောရီးပါ မှားခဲ့မယ်ဆိုရင်……
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကို/မ တောင်ပံမဲ့လိပ်ပြာ ဘု၇င်မ ကလဲ ဘယ်သူ့ဘယ်သူ၇ယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ပြောလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး
၀ါသနာပါလို့ ကဗျာေ၇းသူချင်း ပဋိပက္ခ မဖြစ်ချင်ပါဘူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ထားပါတော့ ……. ကျွန်တော် ယောက်ျားဗျ… မဘုရင်မလည်း ကျွန်တော့်လိုပဲ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်တတ်တဲ့ သူတော့ မာနချင်း တူနေမလားပဲနော်……….. ပဋိပက္ခလည်း ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာ…. အားလုံးက ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေပါဘဲ…. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
ဟုတ်ပါတယ် အားလုံးက မောင်နှမ တွေပါပဲ…
ဘု၇င်မ မာယာ ဆိုတဲ့ ကဗျာဆ၇ာမလေးေ၇………………မာနတွေကအ၇မ်းပြင်းထန်ပြီး လှတယ် မိန်းမတစ်ယောက်၇ဲ့ မာယာနဲ့ မာနကိုဖော်ပြလိုက်တဲ့ ကဗျာလေးကိုေ၇းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ
နောက်ပြီး ယောက်ျားတွေပဲ လှည့်စားခံ၇တာမဟုတ်ပါဘူး မိန်းကလေးတွေလဲလှည့်စားခံ၇ပါတယ် ။အဲဒါကြောင့်မိန်းကလေးတွေက ယောင်္ကျားလေးတွေကို မယုံတော့ဘဲ သူတို့ကို တကယ်ချစ်တယ်လို့ထင်တဲ့လူဆီသွားကြတာပါ ။အဲဒီကစပြီး မိန်းကလေးတွေလှည့်စားတယ်ဖြစ်၇တာပါ။တကယ်တော့မိန်းကလေးတွေကအပြစ်မ၇ှိပါဘူး။အကုန်လုံးကိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ဒါပေမယ့် မိန်းမတိုင်း ကိုယ်ချစ်သူတစ်ယောက်တည်းနဲ့ တူတူနေချင်တာပါ
By: မိုးသည်း at Jan 7, 2011
မ နွေကလေ မလိုမျိုးရေးတတ်ချင်ပါတယ်
မကိုလဲအပြင်မှာတွေ့ဖူးချင်တယ် မကဘယ်မှာနေတာလဲ အကောင့်အပ်ပေးပါလားဟင်
နွေကခင်ချင်လို့ပါနော် အကောင့်က roseylay21 ပါ
By: အိမ်မက်နွေ at Jan 10, 2011
ညီမေ၇ … အစ်မ အပ်ပးပါ့မယ်
By: greatgirl682 at Jan 10, 2011
hote de naw.
u must feel hurt so so much.
wishing u meet the right one very soon.
By: ei lay at Jul 22, 2011